Maitiro ekushanda nematebhu mune echinyakare macOS kunyorera | Ndinobva mac
Nhasi tiri kuzokuratidza maitiro ekushanda akaverengerwa muMac system iyo inokutendera iwe kuti uwedzere kugadzirwa kwako nekushandisa zvemuno zvikumbiro izvo pachazvo macOS ane seyakajairwa. Kana iwe ukacherekedza, patinovhura iyo Safari browser chimwe chezvinhu zvatinogona kuita kugadzira matabhu anotibvumidza isu kuti tive neakawanda mawebhu kero akavhurwa panguva imwe chete.
Huye, Apple software mainjiniya, avo vari kuvandudza vhezheni mushure mevhezheni yesystem iyi yaisanganisira chiitiko chitsva chetabhebhi kune mamwe mapurogiramu ekuzvarwa senge seMapu application
Zvinogona kuve zvakajairika kuti chero panguva yakatarwa iwe unofanirwa kugadzira makukutu akasiyana muMapu yekushandisa uye kana iwe ukatarisa kuti hwindo rekushandisa rakadii, uchaona kuti hapana kwekugona kutsvagisa kwakasiyana. Kuti iwe hausi kuona iyo Safari dhizaini hwindo hazvireve kuti iwe haugone kuzviita uye ndezvekuti kana tichienda kumhando yepamusoro yemamepu ekushandisa uye tinya Wona> Ratidza Tab Barhwindo reapplication rakafumiswa uye system yematebhu inoonekwa kumusoro, senge mune Safari app.
Kubva ipapo, kurudyi kunoonekwa chiratidzo "+" uye nguva yega yega patino tsimbirira pazviri, tinopihwa mukana wekuita hutsva hutsva, tichikwanisa kuve nenzvimbo dzinoverengeka dziri panguva imwechete uye asnillos, tisingafanire kukanda chero yadzo kutsvaga imwe. Iyi nzira yekushanda inogona kusimbiswa mune mamwe maApplication maapplication uye iri kuitwa mune yega yega vhezheni mune mitsva maapp.
Sezvauri kuona, iyo Mac system ine simba kwazvo asi mazhinji eanoshanda akavanzwa kana iwe unofanirwa kuzvitsvaga kupfuura zvakafanira. Zvino iwe unongofanirwa kuyedza izvo zvandatsanangura muchinyorwa chino uye wedzera kugadzirwa kwako nehurongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Maitiro ekushanda nematebhu mune echinyakare macOS kunyorera
Nei ndisingakwanise kuvhura marongero muSystem Preferences?